lbnepal — Wed, 03/07/2018 - 10:09
फूललाई फूलकै माया
उनकै मनको फुलबारीमा
घुम्छु एक फन्को ।
चमक चमक चम्किएको
मधुर प्रकाश जुनको
रहरको फूल फूल्यो
गीत गाउँछु उनको ।
manish — Tue, 03/06/2018 - 17:07
यता वनको चरी वनैमा निसास्सिएको खबर छ
उता धनको चरी धनैमा निसास्सिएको खबर छ
तिमी नै भन काली कहाँ कहाँ मात्र पुगोस यो मनिष
आफ्नै मनको चरी मनैमा निसास्सिएको खबर छ
editor — Mon, 03/05/2018 - 04:59
प्यारा नानीबाबुहरू !
यस पुसे ठण्डीमा न्यानो अभिवादन ।
जीवनमा सुन्नुपर्ने, गुन्नुपर्ने र सही लागेका कुराहरू व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने कुराहरू अनगिन्ती छन् । यद्यपि म यत्तिखेर सुन्न हैन सुनाउन उपस्थित छु । किनभने आफूले बुझेका र मनले खाएका कुरा अरूलाई सुनाउँदा सिकाइ दिगो हुन्छ । मन आनन्दले पुलकित हुन्छ । बेहोसीपन कम हुँदै जान्छ, मनमस्तिष्कमा होसीपन बढ्दै जान्छ ।
editor — Mon, 03/05/2018 - 04:42
देशुङ देशुङ आइलेमी फोटो ङेसेम्ला देशुङ
थेन्सुङ थेन्सुङ आइलेमी ङे सेमरा थेन्सुङ
आङाला ओरो गोटेला देतुहिन गोठाला
दोजो तिङ्ला ठेसुङ ओरोङ छोर्तेनलाला
ङेलागि लेकी जोबुहिन आइलेमु केबुहीन
ठेसुङ ठेसुङ आइलेमु नाम्चेहाटला ठेसुङ
सडक र सत्ता
हर मौसम तिमी हरियाली
तीन हाइकु (दुष्ट छिमेकी)
जे गर्दा नि
जीवन हुन्छ पीडादायी
हमर वसन्त ललीय (कविता)
कुरूप राजनीतिको उपज ‘गरुराहा’ उपन्यास
मैले तिमीलाई कतै भेटिन
जब मान्छेले बोक्छ दाप
मुसाको अन्तिम हाँसो
के फरक छ सादा र रङ्गिनमा?
चार हाइकु (सगरमाथा)
तीन मुक्तक (मन पराइयो)
मरेपछि पनि मेरो माया यु'गिन हुनेछ!